1 Piera 2 - Ny Baiboly
18Hianareo mpanompo, maneke ny tomponareo, amin-tahotra sy fanajana lehibe, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany, fa ny saro-po koa. 19Fa zavatra ankasitrahan'Andriamanitra ny fiaretan'ny olona ny fampahoriana afitsoka azy tsy an-drariny, noho ny fitiavana azy. 20Inona tokoa àry no ho fahamendrehanareo, raha manao ratsy hianareo ka miaritra ny kapoka valin'izany? Fa raha manao soa hianareo no ampahorina, ka miaritra amim-pandeferana, dia izany no ankasitrahan'Andriamanitra. 21Sady izany koa no niantsoana anareo, satria ny Kristy nijaly ho anareo koa, ka namela fianarana ho anareo, mba hanarahanareo ny diany: 22dia izy, ilay tsy nanota akory, na mba niloa-bava hilaza fitaka velively; 23izy ilay notevatevaina, nefa tsy mba nandrahona, fa nanolo-tena tamin'ny mpitsara azy tsy an-drariny; 24izy ilay nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambony hazo, mba ho faty isika raha ny amin'ny ota, fa ho velona kosa amin'ny fahamarinana; ary ny dian-kapoka taminy no nahasitrana anareo. 25Fa efa toy ny ondry nania hianareo, ary indro ankehitriny efa tafaverina amin'ny Mpiandry sy Mpitondra ny fanahinareo. >